Amathiphu Wekhredithi Webhizinisi okusiza Ukuboleka Imali Yenkampani Yakho
Izinzuzo Zezinhlangano Ezigugile Zebhizinisi Lesikweletu
Ukuthenga inkampani eneminyaka eminingana kungakusiza ekwakheni isikweletu ngezindlela eziningi. Ngokuqondile, ngemuva kokuthi iphrofayela yakho yesikweletu idaliwe futhi unemisebenzi ethile ebikiwe yezinkokhelo ezakhayo, ezinye izindlela zizoqala ukusebenza. Enye yalezo zinqubo ezineminyaka yobudala yebhizinisi lakho lomthetho nebhizinisi. Lapho wakhela ibhizinisi lakho isikweletu, ufuna ukuba “nabaphuli” abaningi ohlangothini lwakho ngangokunokwenzeka. Uma ucabanga kanjalo, uzoqala ukubona ukuthi ungabeka kanjani okuningi eceleni kwakho ngamathuluzi atholakalayo. Lesi sihloko simayelana nezinkampani zamashalofu ezindala nezinkampani.
Isikweletu sebhizinisi lokwakha luhambo futhi singaba nzima. Kusetshenziswa konke izinsiza zakho ezikhona namathuluzi kungahle kube ngaphakathi kwezinga lakho lenduduzo. Lokhu kuzoncika esimeni nasenduduzweni yonke kasomabhizinisi, kepha kunezindlela ezithile ezingathwala ijubane lokuhamba ngokushesha kwendlela yokwakha isikweletu. Ungafaka isicelo sekhadi lesikweletu lebhizinisi bese usebenzisa isikolo sakho esikweletayo ukuvunywa. Ukusebenza kwesikweletu akuveli kuphrofayela yakho yesikweletu futhi kuzovela kuphela kuphrofayela yakho yesikweletu sebhizinisi egameni lebhizinisi. Thola okuningi ngokusebenzisa isikweletu sakho ukuze sikudlulisele phambili kuhambo lokwakha isikweletu senkampani.
Yikuphi Ukuhambisana Nezikweletu Okuhlola Ukusebenza Kwebhizinisi Lakho?
Njengoba isihloko sokuhambisana kwebhizinisi, esiyisisekelo sokwakha isikweletu sebhizinisi, sifinyelela ngaphezulu, kuphakamisa umbuzo, yiziphi izinto zokuhambisana ezisebenza kuwe nasebhizinisini lakho? Iqiniso ngukuthi, kukhona amakhulu ezinto ngazinye ezinezinto ezimbalwa ezinemibandela… ezimelela amandla ezinkulungwane zokuhlola ukuhambisana okungenzeka. Ukwehlisa lokhu phansi kungumsebenzi webhizinisi lesikweletu. Ukuhlolwa kwebhizinisi lakho ukuze kutholakale amasheke wokuthobela alula futhi acacisiwe kufanele kwenziwe. Funda kabanzi mayelana nokuthi amasheke asho ukuthini lapha.
Isikweletu Esiphezulu Sengozi Yebhizinisi - Kuyini nokuthi Ungakugwema kanjani
Ukubizwa ngokuthi “ubungozi obukhulu” esikweletini sebhizinisi kucishe kube 'yukufa'. Okuchazayo cishe kuleli cala inqubo eyinkimbinkimbi futhi evame ukubiza kakhulu yokwakhiwa kabusha kwebhizinisi ukuze ibhizinisi lakho liqale ngesikweletu esihlanzekile futhi. Ama-ejensi wokubika ngesikweletu nama-bureaus anezindlela eziyinkimbinkimbi zokuhlola ibhizinisi lakho izinkulungwane zamasheke futhi imiphumela yalezi zinto zokuhambisana noma izinto ezisetshenziswayo iyathengwa ngendlela yomlando webhizinisi noma umbiko wesikweletu. Uma ibhizinisi lakho lingalungele inqubo yesikweletu, futhi umsebenzi wesikweletu ubikwa ngaphandle kokulandela kahle, wonke umuntu uyakwazi ukuthola lolo lwazi kusuka kwizikhungo zokubika. Umphumela? Iphrofayela yakho yesikweletu yebhizinisi kuthiwa yingozi enkulu. Thola ukuthi ungalugwema kanjani lolu hlobo lwenhlekelele.
Lapho Amathuba Knocks… Izimpendulo Zebhizinisi
Iningi labaninimabhizimusi besikhathi libheka ukuba nesikweletu njenge- "net net" noma izinsiza ezengeziwe ukungena endaweni eqinile. Ukuba nesikweletu ngebhizinisi lakho kuzokwenza lokho futhi ungakwazi ukubambelela emalini yakho. Kepha uma ibhizinisi lakho linesikweletu esinamandla, uvulekele ithuba. Wonke usomabhizinisi uyaliqonda ithuba… kodwa ake ahlole ukuthi isikweletu sebhizinisi sidlala kanjani indima ebalulekile lapha.
Isikhathi esiningi uma kukhulunywa ngokubika ngesikweletu sebhizinisi, uzokuzwa i-D & B, i-Experian ne-Equifax, noma kunjalo izinkampani eziningi zokubika izikweletu ziyahweba. Uzobona ukukleliswa kwesikweletu sebhizinisi, imikhiqizo kanye nezinsizakalo ezisiza abanikazi bebhizinisi ukuphatha iphrofayili yabo yesikweletu futhi banikeze imibiko nedatha kulabo okungenzeka ukuthi udlulisela isikweletu kukho. Sihlanganise uhlu lwazo zonke izinhlaka zokubika izikweletu nama-ejensi lapho uzothola khona izinsizakalo zesikweletu sebhizinisi.
Yize isilingo sayo sokuphuma nokuthola udumo ngebhizinisi lakho ngaso leso sikhathi, ukulungiswa kokuhambisana kwebhizinisi lakho mhlawumbe kuyingxenye ebaluleke kakhulu yenqubo yokwakha isikweletu sebhizinisi. Uma uqala ukusebenza nababolekisi bemali, abanikeli bezikweletu abangavikelekile namabhange, amarekhodi ebhizinisi lakho nenhlangano kufanele ube sempilweni ephelele. Ukweqa izinyathelo zokuhambisana nesikweletu, noma lokho esikubiza ngokuthi amabhlogo wokwakha isikweletu sebhizinisi, kungakushiya wenza le misebenzi ngemuva kweqiniso, okungahle kube yinkinga kakhulu. Sephula amabhlogo wokwakha ngamaqembu futhi sichaze ukubaluleka kokwakha isikweletu sebhizinisi ngendlela efanelekile kusukela ekuqaleni.